सबै विवरण: कसरी "एन्ड्रोइड" मा3जी सक्षम
मोबाइल नेटवर्क छन् पहिले नै राम्रो विकास र यन्त्र3जी मोडेम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू तपाईं एक उच्च गति मा उपकरणमा ढिलो इन्टरनेट प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भनेर थाह छ। निस्सन्देह, यस्तो सम्भावना अघि थिएन, तर प्रयोगकर्ता को आवश्यकता बिस्तारै वृद्धि र तदनुसार, मोबाइल संचालक बाट जडान गर्न नयाँ प्रविधि थियो। ढिलो GPRS इन्टरनेट प्रतिस्थापन गर्न आए किनारा, र अब यसलाई मानक छ। वास्तवमा, इन्टरनेट निकै अवसर प्रयोगकर्ताहरूको लागि, वृद्धि को नवीनता संग रूपमा विस्तार गरिएको छ डाटा दर। आज हामी किनभने धेरै मालिक सम्भव छ कि उपकरणहरू सजग पनि छैनन्, यो "एन्ड्रोइड" मा3जी सक्षम कसरी कुरा गर्ने निर्णय गरे। तर, उच्च गति इन्टरनेट प्राप्त गर्न इच्छा सधैं त्यहाँ छ।
आज, लगभग सबै नयाँ मोबाइल उपकरणहरू तेस्रो-पुस्ता नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ, यो त इन्टरनेट जडानहरू मा पाइन्छन्, साथै कलको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं 3G सक्षम कसरी प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि हामी तपाईंलाई अहिले बताउन छौँ।
तपाईंले Android मंच मा चल्छ भनेर मोबाइल उपकरणको मालिक हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि पक्कै पनि यो एक3जी विकल्प छ। तपाईं पहिलो पटक जडान मद्दत अनलाइन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, सम्भवत, एक सन्देश तपाईँलाई देखिने समारोह असक्षम वा सही कन्फिगर गरिएको छैन भनेर। तपाईं आफ्नो उपकरणमा इन्टरनेट पहुँच प्राप्त अघि, तपाईं यसलाई सेट गर्न आवश्यक छ किनभने नआत्तिनुहोस्। तदनुसार, तपाईं 3G "एन्ड्रोइड" जडान गर्ने बारे एउटा प्रश्न छ।
आफ्नो मोबाइल उपकरणमा सेटिङहरू बनाउन क्रममा, तपाईं पहिलो तपाईं इन्टरनेट ट्राफिकको दर छ भने जाँच गर्न आवश्यक छ। यो तपाईं प्रयोग गर्दै अपरेटर आधारमा सान्दर्भिक खण्डहरू मा सक्षम हुनेछ गर्छन्। तपाईं इन्टरनेट प्रदान गर्नुभएको छैन भने, त्यसपछि हामी किनभने तपाईंले सक्रिय प्याकेज बिना नेटवर्क प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एक सुग्घर योगफल खर्च गर्न सक्छन्, यो प्लग सुझाव। तपाईं, तर पनि आफ्नो मोबाइल उपकरणमा डाटा शामिल नयाँ महसुल स्विच गर्दा त तपाईं कसरी "एन्ड्रोइड" मा3जी सक्षम सिक्नुपर्छ, पहुँच खोल्न इन्कार गर्न जारी छ। यो धेरै बस गरिन्छ।
सेटिङ को प्रक्रिया
डेस्कटप, मोबाइल उपकरणमा, तपाईं सेटिङ संग एक खण्ड फेला पार्न आवश्यक छ, कि हामी इन्टरनेट जडान गर्न जाँदैछन् छ। निस्सन्देह, यो सबै उपकरण मा फर्मवेयर को आफ्नो संस्करण मा निर्भर गर्दछ, तर तपाईं मेनु पाउन सक्षम हुनेछ। को "एन्ड्रोइड" मा3जी सक्षम गर्न, तपाईं को लागि जिम्मेवार छ जो अनुरूप सेटिङहरू खण्ड, खोल्न आवश्यक हुनेछ एक वायरलेस नेटवर्क सेट अप, प्रायजसो, यो वस्तु वाइफाइ प्रतिमा संग endowed छ। तपाईं यो कार्य गर्न पारित गर्न व्यवस्थापन गर्दा, तपाईंले APN सेटिङहरू निर्दिष्ट गर्नुपर्छ, प्रायजसो, यो खण्ड शब्दहरू मुनि लुकाउन सकिँदैन "अतिरिक्त" वा "थप"। अब तपाईं पहुँच बिन्दु को प्रविष्टि गर्न आवश्यक छ। यसलाई जो प्रयोग मोबाइल अपरेटर देखि सुरु, गर्नुपर्छ। तपाईं नियमित दुई कम्पनीहरु को सेवाहरूमा, उदाहरणका लागि मामला मा आफ्नो उपकरण दुई सिम कार्ड समर्थन भने बारी भने, क्रमशः, कोठा को प्रत्येक लागि एक समायोजन गर्न आवश्यक छ। तथापि, इन्टरनेट जडान, तपाईं आफैलाई लागि उनलाई एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पहुँच बिन्दु सेटिङहरूमा जानुहोस् अघि, तपाईं निश्चित बक्समा सेटिङहरू जाँच गर्न आवश्यक, त्यसैले तपाईँले आफ्नो मोबाइल उपकरण मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गरी डाटा प्रसारण गर्न अनुमति दिन्छ। यी कदम पूरा गरेपछि, तपाईं आफ्नो मोबाइल उपकरणमा3जी समारोह सक्षम गर्न आवश्यक छ। तर पहिलो तपाईं APN खण्डमा सबै आवश्यक वस्तुहरू भर्न आवश्यक छ। तपाईं त्यहाँ निर्दिष्ट हुनु पर्छ भनेर थाहा छैन भने, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल अपरेटर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिले यस्तो लेखे रूपमा, प्रत्येक यसको आफ्नै सेटिङहरू छ। तपाईं कसरी "एन्ड्रोइड" मा3जी बारी थाहा छैन? त्यसपछि सबै आवश्यक जानकारी मोबाइल अपरेटर मा पाउन सकिन्छ। यी डाटा नेटवर्कमा पठाइएका छन् रूपमा र इच्छित पहुँच बिन्दु गर्न छिटो र सजिलो जडान लागि प्रयोग गरिन्छ तपाईं नयाँ प्रोफाइल मा निर्दिष्ट कि नाम, पूर्ण कुनै पनि हुन सक्छ।
निष्कर्ष: कसरी "एन्ड्रोइड"3जी सक्षम
तपाईं, प्रत्येक सिम कार्ड को लागि धेरै प्रोफाइल सिर्जना यहाँ मात्र आफ्नो प्राथमिकता निर्भर हुनेछ छ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं नेटवर्क सेट एकपटक अप र तपाईं अनलाइन प्राप्त गर्न चाहन्छु, तपाईं 3G सक्षम हुनुपर्छ। यो सामाग्री हामी स्मार्टफोन काम केन्द्रित हुनाले, अर्को तथ्य उल्लेख गर्न आवश्यक छ। आधुनिक ट्याब्लेट कम्प्युटर "एन्ड्रोइड" नियन्त्रणमा पनि वाइफाइ र3जी मार्फत इन्टरनेट पहुँच अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, समायोजन निर्देशनहरू, मोबाइल फोन को एक उदाहरण हामीलाई छलफल भएको थियो कि एक समान अनुसार ठाउँ लिन्छ। यो पनि आधुनिक ट्याब्लेट कम्प्युटर स्वचालित रूपमा मोबाइल इन्टरनेट को सक्रियता उत्पादन गर्न सक्छन् भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
इन्टरनेटको किन गिरावट गति बाहिर कसरी पाउन?
DDNS: यो के हो र कसरी यो कन्फिगर गर्न?
कम्प्यूटर ग्राफिक्स को प्रकार
डाउनलोड कसरी मा "एन्ड्रोइड" भिडियो "Yutuba" गर्न?
Blokcheyn - यो ... कसरी blokcheyn गर्छ, लाभ, आवेदन, संभावनाहरु
मानिस वृष, लियो महिला: सम्बन्ध, संघ
Marmoleum - समीक्षा र विवरण
सामाजिक सञ्जाल के हो
ब्याट्री। Polarity प्रत्यक्ष र रिवर्स
Photoshoot "एक चमत्कार लागि प्रतीक्षा गर्दै।" सुन्दर विचार
विन्डो वातानुकूलन: काम सिद्धान्त, फाइदा र बेफाइदा
स्पार्कलिंग शराब "जीन पॉल शेर": वर्णन, रचना र समीक्षा